Yiliphi izinga likashukela wegazi elijwayelekile emadodeni? > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
Impendulo yombuzo wokuthi kungani abantu besifazane bekhula ngokushesha ukwedlula abesilisa, ochwepheshe abavela e-Austria banikeza. Baqhubeka nokubheka isikhathi eside, lapho baphetha khona ukuthi ngokuyinhloko kwakufanele basolwe.
Uma ogogo nomkhulu bathanda ukunakekela abazukulu babo futhi bachitha isikhathi nabo, lokhu akugcini nje ngokuvusa imimoya yabo futhi kubasize bazizwe bedingeka futhi befuneka, kodwa futhi kuletha izinto ezibonakalayo.
Ukudla ushizi we-cottage kusihlwa ngisho nangaphambi kokulala akuyona ingozi ngokuthola isisindo ngokweqile. Ngaphezu kwalokho, izisebenzi zaseFlorida State University zithi ushizi wekotishi usuphuze kakhulu.
Ukudla okwanele nokunempilo kuyisihluthulelo sempilo enempilo. Akuyona imfihlo ukuthi ukudla kuthinta ngqo isimo somzimba. Imiphumela yokungondleki ingahle yanele.
Isichazamazwi> Umbhali Wezondlayo: UMarina Stepanyuk
Labo abagqugquzela ukuzila ukudla njengendlela yokwelapha okusebenzayo bavame ukukhuluma ngezinzuzo zako. Izinzuzo zokuzila ezomile ukuthi kungenye yezindlela ezahlukahlukene zokwelashwa.
Ukuze umzimba usebenze ngokufanele, nomuntu azizwe ephapheme futhi enempilo, udinga ukudla kahle. Njengamanje, kunenombolo enkulu kakhulu.
Imvamisa, i-gallder ibunjwe ngumbala, ihlukanisa phansi (umkhawulo obanzi wesitho), umzimba nentamo (ingxenye emincane kakhulu). Lesi sitho siyindawo yokugcina ye-bile (ebamba 40-60 ml), okuthi.
I-leukocyturia yinto yokwanda okuqhubekayo kokuqukethwe kwamangqamuzana amhlophe egazi - i-leukocytes ku-urinalysis. Imvamisa, kubantu abadala, ngokuya ngobulili, ama-leukocytes angama-5-7 emadodeni ayatholakala.
Izifo> Izifo zohlelo lwe-genitourinary Umbhali: Daria Sloeveranyuk
Iziguli ezinezikhalazo zokushiswa yinhliziyo nobunzima ngenkathi kudlula ukudla ngokusebenzisa i-esophagus zitholakala ukuthi zinesifo i-GERD. Yini le Lesi sinqamuleli simele i-gastroesophageal Reflux.
Izifo> Izifo ze-Digestive apparatus Umbhali: Vladimir Konev
Ukukhuluphala (lat. Ama-Obesitas - ukugcwala, ukuqina) yisifo esingalapheki esibonakaliswa ukuqoqwa kwezicubu ze-adipose okweqile emzimbeni womuntu, okuholela ekuzuzeni isisindo.
Izimpawu> Izimpawu Nezimpawu Ezijwayelekile Umbhali: U-Eugene Yankovsky
I-hallucination yisithombe esivele engqondweni futhi esingahambisani nokukhuthaza kwangaphandle. Imbangela yokuqothuka kungakhathala okukhulu, ukugula okuthile kwengqondo.
Izimpawu> Ukuqonda kanye nokubhala ngokuziphatha: U-Eugene Yankovsky
Uma izinyawo zomuntu zihlala zibanda, njengomthetho, isimo esinjalo siba yinto ejwayelekile kuye, futhi akaboni le nto njengento eyethusayo. Njengomthetho.
Izimpawu> Izimpawu nezibonakaliso ezijwayelekile Umbhali: Marina Stepanyuk
Ukuqanjwa kwamamililitha ayikhulu wamaconsi wamehlo we-Okomistin kuqukethe i-benzyldimethyl ammonium chloride monohydrate esebenzayo engamaphesenti ayi-10. Amanzi ahlanziwe kanye ne-chloride.
I-Miramistin iqukethe into esebenzayo - i-Benzyldimethyl ammonium chloride monohydrate - 100 mg, kanye namanzi ahlanziwe. Ezinye izinto azibandakanywa eMiramistin. Ifomu.
Imithi> Umbhali we-Antiseptics: UMarina Stepanyuk
Ukwakheka kwecwecwe elilodwa lokulawulwa komlomo kufaka phakathi ama-bacterium i-Lactobacillus reuteri RC-14, Lactobacillus rhamnosus GR-1 ngenani lama-degree ayi-10 kuye kwayi-9 CFU. Futhi kuqukethe okwengeziwe.
I-Aseptic iqoqo lezinyathelo okuhloswe ngazo ukuvimba ukungena kwamagciwane emgobeni wamanxeba nokukhula kwezifo ezithelelanayo ngenxa yalokhu.
Amavithamini ayizithako ezilula zezinto eziphilayo zemvelo ehlukahlukene. Ngokubamba iqhaza kwinani elikhulu lokuphendula kwamakhemikhali okwenzeka emzimbeni, benza imisebenzi yokusayina.
I-Bacteremia iwukuba khona kwamagciwane egazini. Ukungena egazini lama-microorganisms angaphandle kwenzeka ngokusebenzisa ulwelwesi lwama-mucous olimele, izindawo zesikhumba, kanye nange-pathological.
Wonke umama osanda kusikwa osanda kubuya namaphupho okuqinisa umzimba wakhe abuyele kulezo zinhlobo ezazimjabulisa ngesikhathi sokubeletha.
Imininingwane ejwayelekile Isikhumba sobuso njalo sivezwa emiphumeleni elimazayo - lokhu kuyithonya lemvelo yangaphandle, kanye nemiphumela yokusetshenziswa njalo.
Imininingwane ejwayelekile Ama-hemorrhoid ayisimo esidala sokuqina kwemizimba ye-cactous ye-rectum, ngokuqhubekayo engaphenduki. Ngenxa yokugeleza okuphazamisekile futhi.
U-Anna: Sekuyiminyaka eyi-12 ngine-hernia yomgogodla. Yiqiniso kuphela isifundo esisizayo.
UVladimir: Marina, sawubona! Kuyamangaza ukuthi akukho okuphawulayo esihlokweni sakho! Futhi isihloko sithi.
UKira: Ngokokuqala ngizwa ukuthi ngemuva kuka-Alflutop bathola amakhilogremu ayi-15))) Uhlobo oluthile lokungabi nalutho. Lokhu akuyona.
U-Anna Perova: Ngibuye ngithathe i-Angiorus, isidakamizwa esihle futhi engabizi. Ngisenesigaba sokuqala kuze kube manje.
Zonke izinto ezisetshenziswayo ezethulwe kuwebhusayithi zenzelwe izinjongo zokwazisa nezezifundo kuphela futhi azinakuthathwa njengendlela yokwelashwa noma ukubonisana okwanele okubekwe udokotela.
Abaphathi besayithi nabalobi bezindatshana abanasibopho sokulahleka kanye nemiphumela engaqhamuka lapho kusetshenziswa izinto zasendaweni.
Izindlela Zokuhlola Igazi Ushukela
Ukuzimisela kwe-glucose yegazi ekuhlolweni kwebhubhoratri kwenziwa ngalezi zindlela ezilandelayo:
Ukuhlaziywa okuyisisekelo kwe-venous or capillary biofluid (igazi),
I-GTT (isivivinyo sokubekezelela ushukela),
Ukuhlaziywa kwe-HbA1C (glycosylated, glycated hemoglobin).
Ukulungiselela kocwaningo kubandakanya imithetho embalwa elula. Isiguli sidinga:
ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kocwaningo, yenqaba ukudla okunamafutha,
Izinsuku ezingama-2-3 zokukhipha iziphuzo eziqukethe utshwala,
okwesikhashana (ngezinsuku ezingama-2-3) qeda imithi,
ngakusasa kohlaziyo ukukhawulela ukusebenza komzimba, kanye nokusetshenziswa kwama-carbohydrate alula (amaswidi),
gcina irejimeni yokuzila ukudla amahora angama-8 kuya kwayi-10 ngaphambi kwenqubo (ukuzila ukudla yisimo esikhulu sokuthola imiphumela yocwaningo efundisayo).
Ekuseni ngosuku lokuhlaziywa, akunconywa ukwenza izinqubo zokuhlanzeka ngomlomo, ngoba amazinyo angaqukatha ushukela ekwakhiweni. Futhi kufanele uyeke i-nicotine, okungenani ihora ngaphambi kwesifundo. Ngaphambi kokuhlaziywa, kwenqatshelwe ukuhlolwa kwe-x-ray, amaseshini we-physiotherapy.
Uma imiphumela microscopy ingagculisi (izinkomba zanda noma zincishisiwe ezihlobene namanani wesethenjwa), inkomba yokuhlaziywa ikhishwa kaninginingi. Ukunikela ngegazi kuyadingeka ngezikhathi ezithile zamasonto onke.
Ukucaca kwemiphumela kuthinteka:
amandla omzimba osukwini lwenqubo,
ukungahambisani nemibandela yokudla okunempilo kanye nokubulawa yindlala ngaphambi kokuhlaziywa,
ukwelashwa ngemishanguzo ye-hormonal,
Ukuphambukiswa kwemiphumela kusuka enkambu evamile yocwaningo oluphindwe kabili yisizathu sokwenza i-microscopy ethuthukile.
Ukuhlolwa kokubekezelela kwe-glucose isifundo esenziwa elabhorethri esuselwa kwisampula yegazi eneziteji ezimbili:
ngokuyinhloko esiswini esingenalutho
kaninginingi - amahora amabili ngemuva kokuthi "umthwalo we-glucose" (isiguli siphuze isixazululo samanzi sikashukela, ngesilinganiso sama-75 g. ento ngama-200 ml wamanzi).
I-GTT inquma ukubekezelela i-glucose, okungukuthi, izinga lapho ama-carbohydrate adonswa ngumzimba. Lokhu kunikeza isisekelo sokuxilongwa kwesifo sikashukela noma isimo sangaphambi kwesifo sikashukela. Isifo sikashukela siyisimo somngcele womzimba lapho amazinga kashukela edlulwa, kepha angahambelani noshukela weqiniso. Ngokungafani noshukela, i-prediabetes iyaphindeka.
I-Glycated hemoglobin iyingxenye yengxenye yamaprotheni amaseli abomvu egazi (hemoglobin) ene-glucose, engaguquki isakhiwo sayo izinsuku ezingama-120. Ukuhlaziywa kwe-HbA1C kunikeza ukuhlolwa kwenhloso kwamazinga kashukela wegazi ngalesi sikhathi. Ucwaningo lwenziwa ngokufanayo ekuhlolweni kwesisekelo kashukela wegazi. Ngamanani akhuphukayo ezivivinyo ezintathu, i-endocrinologist inqunyelwe ukubonisana nomuntu wesilisa.
Ngama-microscopy we-biochemical, amapharamitha asele ahlolwa ngasikhathi sinye, kufaka phakathi izinga le-cholesterol. Lolu cwaningo alubalulekile kangako, ngoba ezimweni eziningi, izinguquko ze-atherosselotic vascular goeszana hyperglycemia. I-cholesterol ephelele ayifanele ibe ngaphezulu kuka-6.9 mmol / L (LDL - isuka ku-2.25 iye ku-4.82 mmol / L, HDL - isuka ku-0.70 iye ku-1.73 mmol / L).
I-Millimole ilitha (mmol / l) - inani lelebhu yokulinganisa kwe-glycemia eyamukelwe eRussia Federation. Umkhawulo ophansi wokuqukethwe okujwayelekile ushukela emadodeni amadala okuzala kwengane ngu-3,5 mmol / L, kanti okuphezulu ngu-5.5 mmol / L. Ezinganeni ezingamaduna nasebusheni, okujwayelekile kuncipha kancane.
Emadodeni amadala (aneminyaka engaphezu kwengu-60 ubudala), amanani e-glycemia aguqukela phezulu. Lokhu kungenxa yezimpawu zomzimba ezihlobene nobudala (ukuncipha kwezicubu zokuthambekele kwe-insulin). Imikhuba yoshukela egazini emadodeni ngezigaba zeminyaka (ku-mmol / l):
Babies Abafana nentsha ngesikhathi sokuthomba Amadoda Abantu abadala
kusuka ku-2.7 kuye ku-4.4 sisuka ku-3.3 kuya ku-5.5 sisuka ku-4.1 siye ku-5.5 sisuka ku-4.6 kuya ku-6.4
Inani langempela likashukela egazini linqunywa ngokuqinile esiswini esingenalutho! Imiphumela yocwaningo efanelekile ibhekwa njenge-4.2-4.6 mmol / L. Isilinganiso esivumelekile semngcele ophansi weglucose ngu-3.3 mmol / L. I-Hyperglycemia ngokomzimba ngemuva kokudla, ibuye ibe nohlaka lokulawula.
Ukuhlushwa ushukela okuphezulu kulungiswa ihora elilodwa ngemuva kokudla, khona-ke inani le-mmol / L liyancipha, bese kuthi ngemuva kwamahora amathathu ushukela lubuyisele kwinani lakhona loqobo. I-Glycemia ngemuva kokudla akufanele ikhuphuke ngokungaphezulu kwe-2.2 mmol / L (okungukuthi, umphumela ophelele ulingana ngaphakathi kwe-7.7 mmol / L).
Izinkomba zokuhlolwa kwegazi ushukela
Ngokutholwa kwesifo sikashukela kanye nesimo sangaphambi kwesifo sikashukela esiseduze, abantu besilisa abaneminyaka engaphezu kwengama-50 bayanconywa ukuba bahlolwe igazi nge-glucose ngonyaka. Imikhombandlela yocwaningo ichazwe ngudokotela ngesikhathi sokuhlolwa kwempilo okujwayelekile, kanye nezikhalazo zesiguli.
Izimpawu eziphambili ze-hyperglycemia yilezi:
ukoma okuphikelelayo (polydipsia),
ukuzwela, ukukhathala okusheshayo, amandla ancishisiwe wokusebenza, ukozela,
ukuchama njalo (i-polakiuria),
ukwephulwa kwezakhiwo zesikhumba,
isifiso sokudla (i-polyphagy),
umfutho wegazi ophakeme njalo
ukunqandwa kwe-libido (isifiso sobulili) nomsebenzi we-erectile.
isiyezi nesifo se-cephalgic (ikhanda lekhanda),
isicanucanu ngemuva kokudla,
ukuhlaselwa okungalawulwa kwendlala,
Isifo sokuthuthumela nokuqhaqhazela kwezandla,
ubuthakathaka be-neuropsychological (asthenia),
ukwephulwa kwe-thermoregulation (ukubanda, ukuqhwa kwamakhanda),
isigqi senhliziyo (tachycardia).
Ngokushoda kukashukela egazini, amandla okugxilisa amandla enza buthaka, inkumbulo neminye imisebenzi yokuqonda iyaphazamiseka.
Izimbangela ze-glycemia ezingazinzi emadodeni
Ukwehla noma ukuntuleka koshukela emzimbeni kungenzeka ngenxa yobukhona bezifo ezingakhonjwa, ukubekeka ezintweni ezingaphandle, ukudla okungenampilo kanye nemilutha eyingozi. Okuqukethwe kwe-glucose ephezulu, okokuqala, kukhombisa ukuthuthuka okungenzeka kwesifo sikashukela esingancikeli i-insulin sohlobo lwesibili noma isimo se-prediabetes.
ukusetshenziswa kabi kotshwala ngokuhlelekile (utshwala),
I-Hyperglycemia ingenzeka ngokumelene nesizinda se:
i-pancreatitis engapheli (ukuvuvukala kwamanyikwe),
Izifo ezinomdlavuza (noma ngabe iluphi uhlelo lomzimba olwenzekile kumonakalo we-oncological),
I-hyperthyroidism (ukwanda okwandisiwe kwama-hormone e-thyroid),
i-inhliziyo ye-inhliziyo (ikakhulukazi, ukuhlaselwa yisifo senhliziyo nemivimbo, edlule).
Inani elincishisiwe likashukela egazini libonisa isimo sempilo se-pathological:
ukuntuleka kwengxenye ye-Vitamin-mineral emzimbeni ngenxa yokungondleki (ukudla okungenakulinganisela),
ukungaphatheki kahle kwe-neuropsychological (usizi),
ukusebenza ngokomzimba okwedlula amandla endoda (ukusetshenziswa okungenangqondo kwe-glycogen),
ukuhlukunyezwa kwamaswidi (ukweqisa kwama-carbohydrate alula kubangela ukukhuphuka okukhulu, lapho-ke ukwehla okukhulu kwezinkomba ze-glucose),
ukudakwa utshwala, izidakamizwa, amakhemikhali.
Ukwehla okukhulu kwezinkomba ze-glucose (ngaphansi kuka-3.3 mmol / L) kusongela ukuthuthukiswa kwenhlekelele ye-hypoglycemic. Isiguli sidinga ukwelashwa okuphuthumayo.
Imiphumela ye-hyperglycemia emzimbeni womuntu wesilisa
Ukweqiwa kweshukela kwegazi okujwayelekile emadodeni kusongela ukukhula kwesifo sikashukela sohlobo 2, kanye nezinkinga ezilandelayo:
ukwephulwa kokuhlinzekelwa kwegazi enhliziyweni, njengomphumela - ukushaya kwenhliziyo,
ukunganeli kwegazi okwanele ebuchosheni, ingozi yokuhlaselwa yisifo sohlangothi,
ukushayeka kwegazi ngenxa yokujikeleza kwegazi okuthintekile nokwakheka kwalo okushintshiwe,
wehlise umthamo we-erectile,
Ukwehla okuzinzile kweglue kungolunye lwezimpawu zesifo sikashukela. I-Pathology yesistimu ye-endocrine yomzimba ibhekisele ezifweni ezingalapheki, ezihambisana nezinkinga ezinzima zokulimaza. Ukuze uthole ukuphambuka okufika ngesikhathi, kuyadingeka ukuthi uhlole igazi njalo ngoshukela.
Kubaluleke kakhulu ukwenza ucwaningo lapho kuvela izimpawu zesifo sikashukela i-mellitus (polyphaphia, polydipsia, polakiuria, ubuthakathaka, ukuvuselelwa kwesikhumba okuphazamisekile, umfutho wegazi ophakeme). Ukuxilongwa kwesifo sikashukela kwenziwa kuphela izinkomba zaselebhu zokuhlolwa kwegazi:
isifundo esiyisisekelo segazi le-capillary noma le-venous,
Ukuhlaziywa kwezinga le-hemoglobin ye-glycosylated.
Isilinganiso esiphezulu soshukela wegazi esiswini esingenalutho samadoda esikhathi sokuzala ngu-5.5 mmol /. Ukuvunyelwa okuncane kuvunyelwe (hhayi ngaphezu kwe-0.8 mmol / l) emadodeni angaphezu kweminyaka engama-60 ubudala, ngenxa yezinguquko ezihlobene nobudala ekuzwelweni kwezicubu namangqamuzana ukuya ku-insulin.
Izindlela zokuvimbela ukugcina i-glycemia ejwayelekile emadodeni yile:
ukugcina ukudla okunempilo: ukukhawulelwa okuphezulu kokudla okugcwele amafutha ezilwane, kanye nesingeniso kumenyu yansuku zonke yokudla okune-fiber, amaminerali kanye namavithamini (imifino emisha nezithelo, amantongomane, izindunduma nezinhlamvu),
ukuhleleka okuhlelekile kwama-vithamini namaminerali,
ukungasebenzisi kakhulu ukusetshenziswa kwamaswidi notshwala,
ukuqeqeshwa ejwayelekile kwezemidlalo.
Uma kuvela izimpawu, kufanele ufune usizo lodokotela.